← धन्यवाद गौथली !
मृत्युलाई जित्दाको सुःखद महात्म्य →
आजपनि समाचारपत्रमा सुनिलकै पालो परेको दिपक सरलाई जानकारी गराएँ । उनले बनाएको नियम अनुसार दुई÷दुई बिराएर लेख्ने नियम थियो । आजबाट सूचना विभागमा चाइनीज भाषाको प्रशिक्षण शुरू भयो । तर यो अल्छिपनले जान सकिएन । बिहानै वेलहम्सको टीम (समीर, सन्नी, शर्मिला र शारदा) आइपुग्यौं । उनीहरूको प्राक्टिकल म्यागेजिन आजैभोली सिध्याउनुपर्छ भन्दै । त्यसपछि केही डाटालाई अन्तिम चरण दिएर म डिजाइन हाउस पुगेँ । शायद भोलीसम्म तयार पार्छु भन्ने लागेको छ ।
छोरीलाई घुर्ने बानी छ । धेरै डाक्टरलाई देखाएँ, तर २० को १९ भएन । जस्तोको तस्तै । धेरै सुनिएको भएकोले छोरी संस्कृतिलाई बानेश्वरमा लगेँ । ढिला भइसकेको कारण सोधपूछ मात्रै गरेर हामीलाई फर्कायौं । सधैं आउनुस् भनेर बिदा दिएपछि हामी फर्कियौं र बाहिरै खाजा खायौं । साँझ तरकारी किनमेलको बजार पुगियो । होस्टेलको लागि नियमित सब्जी किन्ने साँझ नै हो ।
बेलुका सुत्नु अघि दैनिकी लेख्छु भनेर कस्सिएपनि लेख्न सकिएन । तर यसलाई आधुनिकरणको रूपमा परिवर्तन गरेर सिधै विद्युतीय लेखनमा ल्याउन खोज्नुपनि मुख्य कारण हो ।
This entry was posted in दैनिकी. Bookmark the permalink.